फ्रान्सले जित्यो विश्वकप २०१८ को उपाधि
फाइनलमा क्रोएशियालाई ४-२ ले हराउंदै फ्रान्स विश्व च्याम्पियन बन्यो । विस्तृतमा
जितको खोजीको पेरु, के बलियो प्रतिद्धन्द्धी फ्रान्सलाई पराजित गर्न सक्ला ?
काठमाडौं । आज हुने विश्वकप अन्तर्गतको दोस्रो खेलमा फ्रान्स र पेरु एक आपसमा भिड्दैछन् । समूह ‘सी’ अन्तर्गतको खेलमा फिफा बरियातामा सातौं स्थानमा रहेको फ्रान्सले ११ औं स्थानमा रहेको पेरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो ।
विश्वकपमा आज तीन रोमाञ्चक खेलहरु हुँदै, कुन खेल कति बजे ?
काठमाडौं । रसिया विश्वकपको आठौं दिन आज तीन खेलहरु हुँदैछन् । आज समूह ‘सी’ को दुई खेल तथा समूह ‘डी’ को एक खेल हुन लागेको हो ।
११ खेल सकिँदा विश्वकपका खेलहरुको नतिजा अनपेक्षित
काठमाडौं । विश्वकपको ११ वटा सकिँदा उपाधिको दावेदार भनिएका राष्ट्रहरुको नतिजा अनपेक्षित आएका छन् । समूह चरणका खेलहरु चलिरहँदा फ्रान्सबाहेक अन्य टोलीको नतिजा फुटबल पण्डितहरुले सोचेबिपरित आइरहेको हो ।
फ्रान्सको अष्ट्रेलियामाथि कठिन जित
एजेन्सी । रसियामा जारी २१ औ संस्करण विश्वकपमा फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई २-१ गोलले पराजित गरेको छ । पहिलो हाफको खेल बराबरीमा सकिएको थियो ।
विश्वकप अपडेटः पहिलो हाफमा फ्रान्स र अष्ट्रेलियाले गोल गर्न सकेनन्
एजेन्सी । रसियामा जारी २१ औ संस्करण विश्वकपमा फ्रान्स र अष्ट्रेलियाबिचको पहिलो हाफको खेल गाेलरहित बराबरीमा सकिएको छ ।
अष्ट्रेलिया भर्सेस फ्रान्सः इतिहास रच्ने दाउमा दुबै देश
एजेन्सी । फ्रान्स र अष्ट्रेलिया विश्वकपमा अहिलेसम्म आमने सामने भएका छैनन् । तर, तथस्ट मैदानमा फ्रान्स र अष्ट्रेलियाले एक एक खेल जितेका छन् ।
आजबाट विश्वकप फुटबल, नेपाली समयको तालिका सहित
काठमाडौं । फुटबलको महाकुम्भ आजबाट रसियाको मस्कोमा सुरु हुँदैछ। रसिया संस्करणको विश्वकपमा पनि ३२ देश सहभागी छन् । सहभागी देशले लिग कम नकआउटका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
मैत्रिपूर्ण खेलमा फ्रान्सले अमेरिकासँग बराबरी खेल्यो
काठमाडौं । विश्वकपको तयारीमा रहेको फ्रान्सलाई अमेरिकाले बराबरीमा रोकेको छ । शनिबार राति तयारीस्वरुप खेलिएको अन्तिम खेदमा फ्रान्सलाई अमेरिकाले १ १ गोलको बराबरीमा रोकेको हो ।